सरकारले दुर्गा प्रसाइँलाई कारवाही गर्न नसके यी तिन युवतीले प्रसाइँको मुख सिलाइदिने !
साउन ०६, २०७५ बिगुल
काठमाडौं, ६ साउन । पछिल्लो केही दिन यता बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँ निकै विवादमा आइरहेका छन्। प्रसाइँले बंगलादेशमा अध्ययन गर्दै आएका छात्रालाई त्यहाँका प्रोफेसरहरूले करणी गर्ने गरेको निराधार अभिव्यक्ति दिएसँगै उनको विरोध शुरु भएको थियो। त्यस विषयमा बंगलादेशमा एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत छात्राले सिलाइ दिने बताएका छन्।
अहिले सामाजिक संजालमा प्रसाइँको भिडियो धेरैनै भाइरल बनेको छ भने उनले भिडियोमा बंगलादेशमा अध्ययन गर्दै आएका छात्रालाई त्यहाँका प्रोफेसरहरूले करणी गर्ने गरेको बताउँदै गरेको देखिन्छ। भिडियोमा उनले भनेका छन्,” ‘बंगलादेश पढ्न गएका हाम्रा चेलीबेटीहरू किन ढिला आउँछन् ? केटाहरू पाँच वर्षमा पढेर आउँछन् । अनि केटीहरू किन ९ वर्षसम्म पनि आउँदैनन् ? त्यहाँका प्रोफेसरहरूले करणी गरेर राखेका छन् । केटीहरूलाई लास्ट चान्समा आउँछ र पास भएर आउँछन् । पीडा छ नि ।’
उनको यस विज्ञप्तिको कारण उनको धेरैले विरोध गरेका छन्। उनले दिएको अभियक्ति गैरजिम्मेवार भएको कारण उनि माथि कारवाही हुनुपर्ने धेरैले बताइरहेको अवस्था रहेको छ। बंगलादेशमा एमबीबीएसमा अध्ययन गरिरहेका छात्राहरु जेनिया राई, लीला खत्री र श्वेता शर्माले दुर्गा प्रसाइँको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। भिडियोमा उनिहरुले सरकारले प्रसाइँको कारवाही गर्नु पर्ने भन्दा चर्को आलोचना गरेका छन्। यदि सरकारले कारवाही गर्न नसके आफुहरु चिकित्सक भएको क् कारण मुख सिलाउन पनि राम्रोसँग आउने कुरा उनिहरुले भिडियो मार्फत चेतावनी दिएका हुन्।
प्रकाशित : आइतबार, साउन ०६, २०७५११:०७
अनसनतन्त्र भर्सेस लोकतन्त्र ! कसको होला जित ?
१० मिनेट अगाडि बिगुल न्यूज- SG
५८ मिनेट अगाडि बिगुल न्यूज- SG
घट्यो धितोपत्र बजार, हेर्नुहोस कति अंकले घट्यो!
घुस लिएको अभियोगमा सब-इञ्जिनीयर पक्राउ
२ घण्टा अगाडि बिगुल न्यूज- SG
पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ गितबारे निर्णय गर्न लोकदोहोरि प्रतिष्ठानको आकस्मिक बैठक !